Ukuphupha ikepusi Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Enye into, ikepusi, enjengebhotile okanye usiba, kunokubizwa njengekepusi. Kwelinye icala, emva kweli gama iminqwazi inokufihlwa.
Okokuqala ikepusi ikepusi ilingana kakuhle entloko. Inokufumaneka kwiindawo ezahlukeneyo. Umzekelo, kukho ikepusi yokuqubha, ikepusi yomngcwabo, okanye ikepusi yebaseball. Nanjengokuba isigqubuthelo sentloko sinomlingo, sinokuyifumana into ekuthiwa kukungabonakali kweentsomi kwiintsomi, ezenza lowo uyinxibileyo angabonakali.
Nokuba kwinqanaba lamaphupha, uphawu lwekepusi lunokuvela kwiimeko ezahlukeneyo. Ke ngoko, iimeko ezihamba nazo kufuneka ziqwalaselwe ngokusondeleyo ngakumbi ngexesha loyilo.
1 Uphawu lwephupha «ikepusi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ikepusi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ikepusi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ikepusi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwephupha ubona kwisimboli sephupha "ikepusi" ngokuyintloko luphawu lolwazi lwomphuphi ukuba ulungile ebomini bokuvuka. ekhuselweyo iya kuba. Uya kuxhaswa ngabantu abaza kukuxhasa.
Nabani na obeka ikepusi ephupheni lakhe uya kuthi kungekudala abe nako ukuya kuhambo. Ukukhulula isigcina-ntloko kunokubonisa ukuba umntu uya kushiyeka emva komnye ebomini bokuvuka. Ukuba ubambe ikepusi ngesandla sakho ngelixa ulele, Umonde uyayidinga, kuba ingathatha ixesha elincinci kunokuba bekulindelwe.
Ukuba umntu ophuphayo uphulukana nekepusi yakhe ngelixa elele, uya kuthi kungekudala azifumane esengxakini kwaye iingxaki ngaphambili. Ukuba umntu unika okanye unika umda kumntu oleleyo, oku kunokubonisa ukonwaba kwesi sibini.
Ukuba ubona ikepusi yamabanjwa ephupheni, awungekhe ube nesibindi njengoko ufuna kwimeko enobungozi. Ikepusi yommbiwa ingabonisa ngelixa ulele ukuba uzakuphuhlisa isakhono esiya kuba yinto ebalulekileyo kubomi bakho bexesha elizayo. Ukubona kweBreteswehr beret kunokubonwa njengophawu lokulala ukoyika yalatha ikamva lomphuphi.
Uphawu lwephupha «ikepusi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukubonwa ngokwembono yengqondo, umfanekiso wephupha "unokugubungela" ngaphakathi izimvo ezimileyo bhekisa kumntu oleleyo. Ukubambelela kakhulu kwezi kwi el mundo ukuvuka, okunokuthintela ukucinga ngokukhululekileyo kunye nokuthatha amanyathelo ngokulula.
Ukuba umphuphi ubona ingubo yokungabonakali ngelixa elele, uya kungena ebomini bokuvuka ngoncedo lwabantu abathile kwiindawo ezingazukufikelela kuye yedwa. Kutolikwe ngengqondo yomnqwazi, ikepusi nayo inokuba yindoda ephupheni. Isondo lesini umele kwaye ubuze umphuphi ukuba ayikhathalele iminqweno yakhe kule ndawo.
Ukuba unxibe isigqubuthelo ephupheni, uhlala ulangazelela ukhuseleko kwihlabathi lokwenyani. Ngokwenkcazo yamaphupha ezengqondo, ukubeka ikepusi ye-baseball okanye ikepusi ye-baseball kunokwenza umnqweno ukuqonda bonisa impumelelo yakho.
Ukuba isimboli yephupha "ikepusi" ijongeka njengekepusi okanye uziphu ngelixa ulele, ungazama ukufihla into kwihlabathi elivukayo. Ukuphupha kungathanda ukuthintela a imfihlo kuza ekukhanyeni.
Uphawu lwephupha «ikepusi» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha "ikepusi" iyaqondwa ngaphakathi kohlalutyo lwephupha lokomoya njengesilumkiso kumntu oleleyo, kwihlabathi elivukayo kwabanye abantu. ukunyamezela ngakumbi yiba yiyo. Akufanele ube mncinci kwimixholo yakho yokuziphatha kwaye wamkele ezinye izimvo.